“Waxay u badan tahay in Paulo Dybala ka tagayo kooxda Juventus” – Wakiilka laacibka oo hadlay – Gool FM
(Turin) 16 Maajo 2019. Wakiilka ciyaaryahan Paulo Dybala ahna walaalkiis Gustavo Dybala ayaa shaaca ka qaaday inay jirto fursad wanaagsan oo uu weeraryahanka Juventus ugu biiri karo koox cusub xagaagan.
Xiddiga xulka qaranka Argentina ayaa la la xiriirinayaa kooxaha Atletico Madrid iyo Manchester United kaddib markii uu lumiyey wadadii uu ku aadi lahaa Allianz Stadium xilli ciyaareedkan.
Dybala ayaan si wanaagsan u ciyaarin tan iyo markii uu kooxda Juventus yimid Cristiano Ronaldo, weeraryahankaasoo ay ka soo qaateen Real Madrid sanadkii hore, waxaana kaliya uu dhaliyey 10 gool oo horyaalka Serie A iyo Champions League ah.
Ciyaaryahanka walaalka la ah Dybala ahna wakiilkiisa ee Gustavo ayaa haatan xaqiijiyey in Dybala ay u badan tahay inuu ka dhaqaaqo Magaalada Turin.
“Haa waxaa jira fursad wanaagsan oo uu kaga tagi karo Juventus, dhab ahaan, wuxuu u baahan yahay isbedel” ayuu u sheegay Gustavo barnaamijka show Futbolemico ee ka baxa Idaacadda Argentine.
“Anigu ma dhihi karo wuu tagayaa, laakiin waxaa jira fursad xooggan oo Paulo uu ku tagi doono.”
“Dabcan isagu halkaan kuma faraxsana, Paulo kaligiisna mahan waxaa jira ciyaartooy badan kuwaasoo aan ku raaxaysanaynin Juve, ma noqon doono midka kaliya ee ka tagi doona Juve xagaagaan.”
Douglas Costa, Miralem Pjanic iyo Joao Cancelo ayaa ah ciyaartooy kale oo la qiyaasayo inay ka tagi doonaan xagaagan kooxda kubadda cagta Juventus.